qaabka loo waso naagaha ( galmada iyo soonka) | shumis.net
Home » galmada » qaabka loo waso naagaha ( galmada iyo soonka)
qaabka loo waso naagaha ( galmada iyo soonka)
Mahamad waa wiil ku nool dalka Canada waxaan uu dalkaas galay sanadkii 1997 markaas uu ka dagan xeryaha qaxootiga dalka Kenya waxaana dalkaas uu ku galay qaxootinimo lkn mudo kadib waxaa uu go.aan ku gaaray in uu guursado gabar waxaa uu qadka ka bartay gabar waxaa ay u sheegtay in aysan waligeed la guursan oo ay tahay gabar lkn arintaas sax ma ahen.
Maxamaed ayaa Gabartii waxaa uu ugu yimid muqdisho waxaa uu ku baxshay arooskii lacag badan taas oo waali ah marka loo eego inta aroos lagu dhigan karo lkn arinta ayaa is badasay waayo waxaa ku dhacay wax uusan fileyn.
Waxaa oo ah in uu gabarnimo ka wayay waxaa uu xanaqay lkn waxaa waxaas oo dhan ka baa ba.shay
nasteexo ah gabart uu guursaday waxaa uu yir waxaa ay i dhahaday walal hal habeen oo aad bigaarnimo hesho miyaa ku fiican mase inta noloshada ka dhiman in aad nolal wanasgan aan hesho waxaa uu dhacay in aan nolol wansgan aan helo waxaa ay dhahaday qofna ha ii sheegin aniga waxaad jeceshay ku sinaa.
Maxamad ayaa yiri waxaan ka helay wax aysan raga kale aysan ka helin dumarka ay qabaan waayo waxaa ay iga danbeyn jirtay si aysan oga danebyn dadkii ay ka soo jeeday waxaa ay aheed qof si dhab ii adaacay waan ku qan taasna waa arin aan dadka oo dhan aan laga helin karin.
Title: qaabka loo waso naagaha ( galmada iyo soonka)
Posted by Unknown, Published at June 12, 2016 and have 0 comments